U-Apple Utyala imali ekudaleni umxholo ngaphandle kwemida yaseMelika noJay Hunt | Ndisuka mac
U-Apple utyala imali ekwenzeni umxholo ongaphandle kwemida yaseMelika noJay Hunt
I-Apple iceba ukuqala ukwenza umxholo othile kwezinye iindawo zehlabathi. Ngombono wokuziqhelanisa nentengiso yayo kunye nomxholo wayo wokumamela kunye nokuthengisa kangangoko kunokwenzeka, inkampani yaseMelika esekwe eCupertino iphuhlise isicwangciso esithile ngenjongo yokuchitha inxenye yohlahlo-lwabiwo mali lwayo kuphuhliso lwee-audiovisual phesheya.
Ngokwengxelo zamva nje, U-Apple ukhethe umphathi wangaphambili we Isiteshi 4, UJay Hunt, ukuphuhlisa iqela lokuyila ividiyo eYurophu.
U-Hunt uzakwenza iqela lophuhliso lwamanye amazwe, asebenze phantsi komthunzi wamagosa aziintloko zomxholo uJamie Erlicht noZack Van Amburg., njengoko kuqokelelwe Ezahlukahlukeneyo. Njengomlawuli kwi Isiteshi 4, UHunt wayesaziwa ngemiboniso «Isibuko esimnyama» y "Abantu", kwaye ngaphambi koku wayesebenzela i-BBC One, esongamela iinkqubo ezahlukeneyo.
Ngeli xesha liphelileyo ngoJuni, isigqeba solawulo sayishiya Injini ye-4 phakathi kohlengahlengiso lolawulo, kwaye kuthiwa ungumgqatswa kwizikhundla eziphakamileyo ezininzi eMelika. FEkugqibeleni, iya kuqala nge-Apple ngoJanuwari 2018, ke ngokolwazi oluphethwe ukuza kuthi ga ngoku, ungaqhubeka nokuhlala eLondon.
A Utyalomali ngeapile ejikeleze i-1000 yezigidigidi zeedola kunyaka ozayo kwinkqubo yoqobo. Amanyathelo ekufuneka elandelwe acacile: uthotho lwesimbo "Iphula kakubi" o "Imidlalo yeethrone".
Ke ngoko, uApple uza kujonga ukuguqula ezo zinto zivelweyo zikwimeko ephantsi yohlahlo-lwabiwo mali, ezinje nge "Planet yeeapps" okanye "Carpool Karaoke", kuthotho olukhethekileyo, kwaye oko kukhuphisana nothotho lweenkampani zemveliso ezinje nge Netflix o HBO. Ke ngoko, kuyaqondakala ukuba ukusukela kunyaka olandelayo, uthotho luza kuyeka ukusasazwa ngokukodwa kwiApple Music.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » U-Apple utyala imali ekwenzeni umxholo ongaphandle kwemida yaseMelika noJay Hunt
UBanco Santander wongeza ikhadi leVISA ukuze lisetyenziswe neApple Pay
Lawula ngawo onke amaxesha apho usetyenziso lungena kwi-intanethi ngokuThula kwirediyo